को सिल र यसको जरा सम्म फिर्ता Neolithic अवधि रूपमा टिकटहरु को घटना को इतिहास, आफ्नो आविष्कार विभिन्न सतहहरु मा ढाँचा लागू प्रक्रिया सरल बनाउन इच्छा संग जोडिएको गर्दा भएको थियो। त्यसपछि, पुराना सभ्यताहरू को समयमा, टिकटहरु कागजातको प्रामाणिकता को प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले महंगा र श्रम-गहन आफ्नो उत्पादन को काम थियो: तथापि, व्यक्तिगत छाप को लक्जरी केही किन्न सकिएन।
रूस लागि जाँदा, पुरातन रेकर्ड मुद्रण दशौं शताब्दीमा, मान्यता सम्झौताहरू को राजकुमार संग शुरुवात भनेर संकेत गर्छ। उदाहरणका लागि, भेटिए पुरातात्त्विक उत्खनन मुद्रण राजकुमार Izyaslav गर्न belonged।
मुद्रण आज किन आवश्यक छ?
हाम्रो समय मा, टिकटहरु को स्थिति मौलिक परिवर्तन भएको छ। आज, बाल सदन उमेर कुनै पनि बच्चा तपाईं बिना कुनै हिचकिचाहट कि यस्तो छाप वा टिकट बताउन सक्छ। को टिकट उत्पादनहरु यति गहिरो यो अभिन्न भाग भएको छ कि आधुनिक कागजातको संयन्त्र मा penetrated किनभने यो, अचम्मको छैन। को छाप वा टिकट उपस्थिति कुनै पनि आधिकारिक गतिविधिहरु को आचरण लागि एक अनिवार्य विशेषता छ। यो फलस्वरूप, गत दशकमा व्यापार सम्बन्ध को उच्च गति विकास द्वारा dictated छ र, कार्यप्रवाह प्रक्रियाको अनुकूलन। कुनै पनि आधिकारिक कागजात वा विवरण, एक चिकित्सा रिपोर्ट, को नुस्खा - यो जो दैनिक जीवन, यी राउन्ड, आयताकार वा वर्ग मसी प्रिंट पाउन सकिन्छ जमानत को नाम, पूर्ण सूची हो। यसैले छाप वा टिकट को निर्माण को प्रश्न कुनै पनि कम्पनी को व्यवस्थापनका लागि सर्व छ।
पूर्ण सेट मुद्रण के हो?
खुसीको कुरा, यसको आफ्नै मुद्रण को निर्माण को लागि जरूरी Profiled कम्पनी लागू हुँदैन। स्टेशनरी पसल दायरा तपाईं पक्कै पनि एक आयताकार वा राउन्ड रचना आँखा छाप मा प्राप्त हुनेछ। यो उपकरण तपाईंको सामग्री संग आवश्यक छाप आफूलाई लागि बनाउन मौका प्रदान गर्दछ।
मानक सेट एकीकृत टिकट प्याड एक आवास हुन्छन् र अक्षरका स्लट को रूप मा विशेष अंडाकार सतह भइरहेको स्न्याप, र सबै भन्दा नगद अक्षर र चिमटी। सबै सेट को मानकीकरण तापनि यस को लागि मुद्रण को प्रकार उच्च सुरक्षा विशेषता द्वारा छ। तथ्यलाई inscriptions एक सेट दिइएको जब अक्षर र तिनीहरूलाई बीच स्पेस को मनपरी ढलान बारम्बार लगभग असम्भव छ भन्ने छ।
यो सुविधाजनक रचना छाप्न?
जब तपाईं एक patterned सिल र टिकटहरु किन्न, तपाईं संस्थापन को साधन आवश्यक छैन।
यी कठिन आर्थिक समय मा एक सानो रचना अनुमति मुद्रण बचत गर्न। यो पुरोहित उपकरणहरू को मूल्य दायरा देखि 10 30 वाई गर्न। ई। (प्रदान पंक्तिहरूको संख्या मा निर्भर गर्दछ)।
यो अनुसार कम्पनीहरु मा टिकट विनिर्माण सेवा कम्तिमा एक दिन लाग्छ गर्दा, एक घण्टा भन्दा कुनै थप हुनेछ मुद्रण को निर्माण मा।
कम्पनी जानकारी परिवर्तन को मामला मा (बैंक विवरण, सम्पर्क फोन नम्बर, वा अन्य निर्देशांक) तपाईं एउटा नयाँ मुद्रण गर्न छैन, "को कलाई को फ्लिक" तपाईंको टिकट फिर्ता गर्न-मिति हुनेछ।
कसरी टाइप मुद्रण?
एक डायल मुद्रण डायल गर्न कसरी प्रश्न रुचि कसैको लागि, जवाफ: धेरै सजिलो छ! यो प्रक्रिया अनुकूलन गर्न, तपाईं विधानसभा लागि सेट एक पेन्सिल (वा पाठ सम्पादक संग एक पीसी), ऐना र, वास्तवमा, आवश्यक हुनेछ। र पाठ्यक्रम, तपाईं छाप्न पाठ तैयार छन्। तल आफ्नो कार्यहरूको अनुक्रम छ।
यस तर्कको को स्ट्याक मुद्रण उत्पादन
कागज को एक पानामा वा पाठ सम्पादक लिखित मुद्रण मा उपस्थित हुनेछ भन्ने पाठ। तपाईँको मुद्रण आयताकार रचना भने, यसको आफ्नै लाइन छ प्रत्येक लाइन कागज थिच्नुहोस् पर्छ पाठ (स्क्रिनमा)। प्रत्येक घन्टी लागि राउन्ड टिकट यसको आफ्नै लाइन छ।
प्रत्येक पङ्क्ति एक केन्द्रीय पत्र विनियोजन गरिएको छ। यो सम्पूर्ण पाठ को लागि एक पाठ सम्पादक मा केन्द्र सुविधाजनक छ।
हामी हात पत्र केन्द्रीय लाइन को पहिलो अक्षर अनुरूप मा पाउँछौं। यो राउन्ड छ भने, मुद्रण बाहिरी घन्टी जुनसुकै ठाउँमा आयताकार रचना भने, वा, माथिल्लो पङ्क्ति को केन्द्र मा चिमटी संग ठाँउ। यस मामला मा, शीर्ष मुद्रण पत्र सोध्छन्।
अर्को - छरितो। हामी सही र बायाँ, केन्द्रीय वर्ण को शुल्क आसन्न उत्प्रेरित।
हामी यस्तै तरिकामा नजिकै सार्न जारी। यो मान्य गर्न, ऐना प्रयोग गर्नुहोस्। छवि यसलाई प्राप्य प्रिन्ट फिट हुनेछ।
को अभिलेखमा को शीर्ष मा काम खत्म पछि, तल जानुहोस्। को आयताकार मुद्रण यसलाई क्रमशः स्थित गरिनेछ, तल लाइन मा। बाहिरी आधा-छल्ले को तल - राउन्ड मा। नियम, राउन्ड टिकट हामी केन्द्रीय वर्ण रूपमा सुरु र यो बायाँ र दायाँ देखि सार्न शहर, टेलिफोन नम्बर, OKPO कोड, र यति मा। डी को नाम हो।
यो शिलालेख तयार हुँदा र, बीचमा उत्प्रेरित।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, केही जटिल। एक सानो धैर्य - र आयताकार वा गोलाकार को तपाईँको मुद्रण पूरा सेट तयार छ!
धूर्त "फिलिप्स" पीटी-870: सुविधाहरू
Avanti (घुमक्कड): समीक्षा, फोटो
एक चम्किलो विवाह कसरी बनाउन
तरल साबुन औषधि - आफ्नो घर मा एक अपरिहार्य उपकरण
Kislovodsk अस्पताल "रूस": फोटो र समीक्षा
तपाईं प्रणय दिवस मा एक मान्छे प्रभावित गर्न चाहनुहुन्छ? त्यहाँ विचार गर्दै छन्!
जर्सी - यो फैशन र सहज छ।
Polarized-चश्मा को घाम के हुन्?
बीन सूप: सबै अवसरका लागि नुस्खा
Kramskoy चित्रकला "मत्स्यस्त्री" वा रहस्यमय सपना